Azo atao ve ny mandeha tsy miakanjo ny ankizy? | Bezzia
Azo atao ve ny mandeha tsy miakanjo ny ankizy?
Maria Jose Roldan | 30/04/2021 22:00 | Reny torohevitra
Nisy foana ny hevitra nifanipaka momba ny hoe tsara raha tsy mandeha kiraro ny ankizy sa tsara kokoa amin'ny akanjo kiraro. Ray aman-dreny maro no manakana ny zanany tsy handeha kapa ao an-trano amin'ny tahotra sao ho tratry ny sery izy ireo.
Tena angano io satria miditra amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny lalan-pisefoana ny viriosy. Mifanohitra amin'izany aza, ireo manam-pahaizana momba io lohahevitra io dia manoro hevitra fa tokony tsy hitondra kapa ao an-trano ilay zaza satria toy izany no mampivoatra tsara kokoa ny tongotra.
1 Tokony hanao kiraro ve ny ankizy?
2 Inona avy ireo tombony ho an'ny ankizy raha tsy mandeha kiraro?
3 Mikarakara raha mandeha tsy mitanjaka ny zaza
Tokony hanao kiraro ve ny ankizy?
Manoro hevitra ny manam-pahaizana mba tsy hametraka zazakely amin'ny kiraro mandritra ny volana voalohany. Rehefa miaro ny tongotry ny zanakao amin'ny maripana ambany na ny fikororohana, asio ba kiraro. Aza adino fa ny mandady dia lakilen'ny fampandrosoana tsara ny rafitry ny psikomotoran'ny zaza, noho izany dia tsy tokony hanao kiraro amin'ny tongony izy ireo.
Raha vao manomboka mandeha ny zaza dia tokony hisafidy ny hitafy karazan-kiraro malefaka sy miaina tsara ny ray aman-dreny. Manomboka amin'ny 4 na 5 taona, ny kiraro ampiasaina dia tsy maintsy henjana sy matanjaka kokoa hiarovana ny tongotry ny zaza.
Inona avy ireo tombony ho an'ny ankizy raha tsy mandeha kiraro?
Ny mandeha kapa tsy misy kiraro dia hamela fananganana tsaratsara kokoa ny andohalambon'ny tongotra, manakana azy ireo tsy hijaly amin'ilay antsoina hoe tongotra fisaka.
Mandritra ny voalohan'ny fiainana, eizy zazakely dia hanana fahatsapana bebe kokoa amin'ny tongotra noho ny amin'ny tananas. Amin'ny alàlan'ny mandeha kapa, ny tongotrao dia manampy anao hijery ny tontolo manodidina anao. Ho fanampin'izay, ny mandeha tsy mitondra kapa dia mamela na mandray anjara amin'ny fampandrosoana tsara kokoa ny fahatsapana rehetra ny kely.
Rehefa mandeha tsy mitanjaka, dia hahatsapa karazana firavaka isan-karazany amin'ny tongony ilay kely. Io dia ahafahan'ny zaza mamorona fihetseham-po isan-karazany antsoina hoe kinesthetic, izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny toeran'ny hozatra samihafa sy hanamafisana ny vatan'ny vatana.
Mikarakara raha mandeha tsy mitanjaka ny zaza
Manoro hevitra anao ny tsy hitondra kapa, Tsy midika izany fa ny zaza dia tsy maintsy amin'ny fotoana rehetra tsy misy karazana kiraro. Amin'ny tranga mankany amin'ny dobo filomanosana dia zava-dehibe ny anaovan'ny kely kapaoty, satria toerana anaovana aretina matetika izy io.
Raha misy karazana ratra azo atao mandritra ny fandehanana tsy misy kiraro, zava-dehibe ny fahalalana izay nahatonga ilay ratra. Amin'ny tranga maro dia ilaina ny mahazo ny vaksinin'ny tetanus hisorohana ny aretina tsy hiharatsy ary hiteraka olana lehibe sy lehibe.
Tokony ho fantatry ny ray aman-dreny amin'ny toe-java-misy indraindray ny toe-javatra izay afaka mandeha tsy mitondra kapa ny kely ary rehefa mila manao kiraro izy ireo. Tsy azonao atao ny mamela ny zaza handeha tsy hanana kiraro foana ary ho zatra mandeha tsy mitondra kapa.
Raha fintinina, Manoro hevitra ny dokotera sy ny matihanina fa ny kiraro dia mandeha miboridana tanteraka mandritra ny andro iray. Ny zava-misy amin'ny fahatsapana ny tany sy ny fandehanana eny amboniny nefa tsy misy karazana kiraro, dia manampy azy ireo hanana fivoarana bebe kokoa amin'ny rafi-psikomotorany ankoatra ny tombony hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Reny torohevitra » Azo atao ve ny mandeha tsy miakanjo ny ankizy?
Karazan-latabatra eo am-pandriana 6 hamelana ny efitrano fatoriana